Isbedelka biomass-ka Spain | Cusbooneysiinta Cagaaran
Tomàs Bigordà | | Tamarta dib loo cusboonaysiin karo
Biomass waa mid kamid ah ilaha dib loo cusboonaysiin karo mustaqbal weyn iyo kartida dalkeena, maxaa yeelay waxaan haysannaa habab badan oo aan ku dhalino: beeraha, kheyraadka keymaha… Hase yeeshe, weli waxaan ka fognahay heerar la jeclaan karo iyo inaan uga faa'iideysanno intii karaankeen ah. Sababta Xagee joognaa
Nasiib wanaag, biomass ayaa si isa soo taraysa uga jira aaggeenna mustaqbalna leh rajo badan. Tani waxay ka muuqataa xogta ka socota AVEBIOM Biomass Observatory, oo aan hoos ku sharaxeyno.
2 Waa maxay Observatoriobiomasa.es?
2.1 Jaantus 1: Isbedelka tirada rakibidda biomass ee Spain
2.2 Jaantus 2: Is-beddelka awoodda bayosmiska ee Spain (kW)
2.3 Jaantus 3: Isbedelka tamarta laga sameeyay Spain (GWh)
Laakiin ugu horreyntii waxaan qeexeynaa waxa ay ka kooban tahay tamarta la cusboonaysiin karo. Waxa aan ugu yeerno biomass waa shey dabiici ah ama warshadeed oo loo adeegsado wax soo saar tamarta la cusboonaysiin karo ka soo jeeda isticmaalka habka gubashada ee isla arrintan. Caadi ahaan, biomass-ka waxaa laga soo saaraa walxo ka yimaada noolaha ama haraaga iyo haraaga. Waxay ka koobnaan kartaa caleemo, qashin alwaax ah, qashin, iwm.
Ku fasiraya qaab fudud, haddii beeraleyda ka takhalusi doonaan haraaga dalagyadiisa had iyo jeer dhibaato, isticmaalka biomass waa hab looga baxo, tan iyo qashinka oo dhan waxaa loo isticmaali karaa in lagu soo saaro koronto, heer guri ama warshadeed. Wax soo saarka ka soo baxa biomass ee loo isticmaalo ujeedooyinka tamarta waxaa loo yaqaan biofuels, waxayna noqon karaan kuwo adag (ujeeddooyin kuleyl iyo koronto) ama dareere (biofuels). Waqtigaan la joogo waxaa suurtagal ah in tamar looga isticmaalo biomass siyaabo kala duwan, laga bilaabo kuleylka iyo dhirta dhalinta tamarta ilaa taraafikada iyo codsiyada gaadiidka.
Marka xigta waxaan arki doonnaa garaafyo kala duwan, oo muujinaya isbedelka saddex ka mid ah arrimaha ugu waaweyn qaybta tamarta: Awoodda lagu qiyaasay kW, tirada rakibidda iyo tamarta laga soo saaray GWh. Isha xogta la isticmaalay waa webka ku takhasusay waaxda: www.observatoriobiomasa.es.
Waa maxay Observatoriobiomasa.es?
La Ururka Isbaanishka ee Qiimeynta Tamarta Biomass (AVEBIOM) waxay sameysay degelkan sanadkii 2016 ilaa keen xogta biomass iyo qiyaasaha dadka ugu badan ee suurtogalka ah, oo leh ujeedada ugu weyn ee la isugu keenayo, isla madal, macluumaad ku saabsan adeegsiga biomass kaamerada Spain.
Waad ku mahadsan tahay xogta u gaarka ah AVEBIOM iyo kuwa ay bixiyeen National Boiler Biomass Observatory iyo Indoorka Qiimaha Biofuel, marka lagu daro wada shaqeynta shirkadaha iyo hay'adaha qeybta biomass-ka, wuxuu abuuri karaa isbeddello, isbarbardhigyo wuxuuna bixiyaa xog iyo qiyaas.
Jaantus 1: Isbedelka tirada rakibidda biomass ee Spain
Tusaale cad oo ah kobaca weyn ee tikniyoolajiyaddan ayaa ah kororka tirada rakibidda noocan ah tamarta la cusboonaysiin karo.
Xogta ugu dambeysa ee la heli karo waxay muujineysaa in sanadkii 2015 ay Spain ka jireen 160.036 qalab. Kordhin 25 boqolkiiba ah marka loo eego sanadkii ka horeeyay, halkaasoo tiradaasi ay ka badneyd 127.000.
8 sano ka hor, ma aysan jirin 10.000 rakibaado sanadkii 2015kiina mar hore ayey dhaafeen 160.000, waxaa iska cad in horumarka iyo kororka biomass-ka dalkeenu yahay a xaqiiqo la xaqiijin karo oo si muuqata u muuqda.
Waxaan xasuusineynaa in kuleyliyaashani loo adeegsado ilo tamar biomass iyo abuuritaanka kuleylka guryaha iyo dhismayaasha. Waxay u isticmaalaan il tamar ahaan shidaalka dabiiciga ah sida jajabka xaabada, godadka saytuunka, haraaga kaymaha, qolofka lowska, iwm. Waxaa sidoo kale loo isticmaalaa in lagu kululeeyo biyaha guryaha iyo dhismayaasha.
Jaantus 2: Is-beddelka awoodda bayosmiska ee Spain (kW)
Cawaaqib cad ee kororka tirada rakibidda ayaa ah kororka awoodda la qiyaasay.
Wadarta awooda rakibtay ee Spain lagu qiyaasay waxay ahayd 7.276.992 kW sanadkii 2015. Isbarbardhigga muddadii hore, wadarta awoodda la rakibay kordhay 21,7% marka loo eego 2014, halka qiyaasta kW ay ka yartahay 6 milyan.
Sida lagu arki karo garaafka, kororka miisaanka biomass ee cabirkan ayaa ka koraya hab joogto ah sanadihii la soo dhaafay.
Kobaca soo maray marka la eego wadarta awoodda la rakibay - laga soo bilaabo 2008 illaa xogtii ugu dambeysay ee la bixiyay 2015 waxay ahayd 381%, ka socda 1.510.022 kW in ka badan 7.200.000.
Jaantus 3: Isbedelka tamarta laga sameeyay Spain (GWh)
Si loo dhammeeyo garaafyada, waxaan falanqeyn doonnaa isbeddelka xilliga 8 sano ee la soo dhaafay ee tamarta ay ka dhalisay tamartaan Spain.
Sida labadi mitir ee hore, koritaanka waa mid joogto ah sannadihii la soo dhaafay 2015, oo leh 12.570 GWh, sanadka leh heerka ugu sarreeya ee GWh. 20,24% in ka badan sanadkii 2014. Kororka tamarta ay dhalisay biomass ilaa 2008 wuxuu ahaa 318%.
Isdhexgalka biomass ka mid ah ilaha ugu muhiimsan ee tamarta dalkeena wuxuu si joogto ah u sii wadaa howlihiisa. Si cad wax loo arko horumarkeeda wanaagsan kaliya fiiri xogta 2008.
Muddadaas waxaa jiray 9.556 rakibid oo soo saaray tamar lagu qiyaasay 3.002,3 GWh oo lagu qiyaasay awoodda 1.510.022 Kw iyo sanadkii 2015, ugu dambaysay xogta la heli karo, wuxuu ku kordhay 12.570 GWh oo tamar ah, 160.036 rakibid iyo 7.276.992 Kw oo awood lagu qiyaasay ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Tamarta dib loo cusboonaysiin karo » Isbedelka biomass ee Isbaanishka